5 Talooyin si aad u Kordhisid Heerarka Beddelka Xayeysiiska Fiidiyowga | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 30, 2021 Talaado, Nofeembar 30, 2021 Daniel Salikov
Ha noqoto bilow ama ganacsi dhexdhexaad ah, dhammaan ganacsatadu waxay rajeynayaan inay isticmaalaan xeeladaha suuq-geynta dhijitaalka ah si ay u ballaariyaan iibkooda. Suuqgeynta dhijitaalka ah waxaa ka mid ah hagaajinta mashiinka raadinta, suuqgeynta warbaahinta bulshada, suuqgeynta iimaylka, iwm.
Helitaanka macaamiisha suurtagalka ah iyo in la helo booqashooyinka ugu badan ee macaamilka maalintii waxay kuxirantahay sida aad u suuqgeyso alaabtaada iyo sida loo xayeysiinayo. Xayeysiinta alaabtaadu waxay ku jirtaa qaybta xayaysiinta warbaahinta bulshada. Waxaad qabataa hawlo kala duwan sida dhejinta sawirada iyo qoraalka, soo dejinta fiidyowga, iyo ku darista waxyaabo hal abuur leh si aad u kiciso ka qaybgalka dhagaystayaasha.
Waxaa ka mid ah dhammaan xeeladahaas, isagoo xayeysiis video ah sida ugu fiican ugu shaqeeyaan si ay u suuq geeyaan alaabta oo ay u gaaraan daawadayaasha ugu badan. Sidaa darteed, suuq-geynta muuqaalku waa aalad internet oo awood leh oo iibisa adeegyada oo dhista astaantaada.
2021, kharashka xayeysiinta fiidiyooga dhijitaalka ah ee Maraykanka ayaa lagu qiyaasay 55.34 bilyan oo doolarka Maraykanka ah waxaana isha la saadaaliyay in kharashaadku uu kordho ilaa 78.5 bilyan dhamaadka 2023. Wadarta kharashka xayeysiinta dhijitaalka ah ee Maraykanka ayaa la filayaa inuu kordho min 191 ilaa 250 Bilyan oo dollarka Maraykanka ah isla muddadaas.
Sidoo kale, si aad xeeladaha xayaysiiskaaga uga dhigto mid aad u xiiso badan, maalgeli animation muuqaal ah. Fiidiyowyo firfircooni waxay soo jiitaan dareenka isticmaalayaasha rajada inay beddelaan. Samaynta fiidyow soo jiidasho leh ayaa laga yaabaa inay noqoto mid adag si aad u hesho adeeg soo saarid fiidyow iyo animation si aad u caawiso.
Waa maxay Xayeysiiska Fiidiyowga?
Xayeysiisyada fiidyaha ee khadka tooska ah ama xayeysiinta fiidyaha ayaa hadda ah dhexdhexaadinta ugu waxtarka badan ee internetka. Xogta xayaysiis ee aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ciyaara ka hor, inta lagu guda jiro, ama ka bacdi baahinta macluumaadka. Xirfadlayaasha suuqgeynta warbaahinta qaarkood ayaa sidoo kale kordhiya qeexida xayaysiisyada fiidyowga si loogu daro xayeysiisyada soo bandhigida nuxurka muuqaalka, sida kuwa bilaabaya daawashada fiidyaha marka uu qofku dul saaro cursorka jiirka iyo xayeysiisyada fiidyowga asalka ah ee lagu xayeysiiyo shabakadaha xayeysiiska dhijitaalka ah.
Waa kan tusaale xayeysiis muuqaal gaaban oo aanu soo saarnay:
Shaki kuma jiro in xayeysiiska muuqaalku uu yahay mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee lagu kobciyo ganacsigaaga oo lagu gaaro daawadayaasha internetka. Khubaradu waxay filayaan oo ay rumaysan yihiin in xayaysiisyada muuqaalku ay xukumi doonaan tobanka sano ee soo socda, oo soo jeedinaysa in hadda ay tahay wakhti ku habboon xirfadlayaasha suuq-geynta si ay u ballaariyaan aqoontooda qaybtan. Sidoo kale, waa inay baaraan sida loo wanaajiyo gaaritaankooda iyo guud ahaan waxtarkooda ololeyaal kala duwan.
Laga soo bilaabo ku darista cinwaannada soo jiidashada leh ee ku dhejinta sawirro awood leh, halkan waxaa ah 5 tabaha xayeysiis ee fiidiyooga ah ee aad u wanaagsan kuwaas oo kor u qaadi doona heerarka beddelka adiga oo isticmaalaya suuqgeynta fiidiyowga.
Talooyin aad Raacdo Markaad Ku Dartay Xayeysiiska Fiidiyowga
Si aad u hesho suuq-geynta fiidiyowga wax ku oolka ah iyo heerka beddelka sare, halkan waxaa ah qaar ka mid ah tabaha iyo tabaha habka hal-abuurka ah ee la tixgeliyo. Xayeysiiskaagu waa inuu muujiyaa dhibaatada ay xallin karto shirkaddaada ama astaantaada, isticmaal qoraal wanaagsan qorshaha fiidiyowga, oo dooro goobta saxda ah. Halkan waxaa ah 5 tabaha ee xayeysiisyada fiidiyowga ee keena beddelka.
Ka dhig Bilowga Xayeysiiska Fiidiyowga mid xiiso leh oo iftiimi astaantaada
Helitaanka fikradda xayeysiisyada fiidiyooga kuma filna inaad keento beddelaad sababtoo ah bilawga fiidyahaaga ayaa ka sii muhiimsan. Haddii aadan rabin in daawadayaasha ay ka boodaan xayeysiiska ama gujin, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa bilawga xayeysiinta si aad u ogeysiiso ilbiriqsiyada ugu horreeya oo aad tiriso.
Si aad ula xidhiidho dhagaystayaashaada, samee dadaal yar oo fiidyahaaga ku billow hadal soo jiidasho leh adiga oo wax ka qabanaya dhibaatooyinka caadiga ah qaarkood, waydiinaya su'aal khuseeya, ama ku dara shay xiiso leh oo ka dhigaya astaantaada mid muuqata.
Dhammaan milkiilayaasha ganacsiga waxay rabaan macaamiisha inay arkaan xayeysiisyada ugu dambeyntii; Haddii ay ka tagaan inta u dhaxaysa, waxaa jira fursado yar oo iibkaagu si kor loogu qaado. Haddaba, ku billow xayaysiisyada fiidyahaaga muuqaallo wanaagsan, oo ku dar sawirro habboon iyo qoraal cad.
Hubi in calaamaddu ay iftiimisay oo ay si dhakhso ah u kicin karto xiisaha macaamiisha. Ujeedadan awgeed, waa inaad u sheegtaa macaamiisha sababta summadaadu u fiican tahay iyo sida adeegyadaadu u bixiyaan faa'iidooyinka. Dadku wax walba waxay ka filayaan tayada alaabta ilaa taageerada macaamiisha, markaa xayaysiisyadaadu waa inay xooga saaraan sababta shirkaddaadu waa mid gaar ah laguna kalsoonaan karo.
Caddaynta Bulshadu waa u muhiim Xayeysiiska Fiidiyowga
Talo kale oo diiradda lagu saarayo marka la samaynayo wax-soo-saarka muuqaalku waa caddayn bulsho. Waa shay inta badan la iska indho-tiray ee xayaysiinta warbaahinta bulshada. Sida aan ognahay in tartan aad u badan uu ka jiro adduunka dhijitaalka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto oo aad ka gudubto si aad u dhiirigeliso macaamiishaada inaad bixiso adeegyo tayo leh oo khadka internetka ah oo ay ku kalsoonaan karaan. Si kastaba ha ahaatee, ma fududa in isla meel lagu ordo tartamayaasha aan la tirin karin.
Dhammaan milkiilayaasha ganacsigu waa inay kuwan adeegsadaan wax soo saarka video xeeladaha lagu arko calaamaddooda oo gaadhay heerar sare. Tusaale ahaan, dhisida kalsoonida waa in ay noqotaa mudnaanta. Qodobkan la'aanteed, aad ayay u adkaan doontaa in la rumaysto waxa aad la hadlayso dhagaystayaashaada.
Waxaa laga yaabaa inay shaki ka muujiyaan, gaar ahaan marka ay tahay ololaha ugu sarreeya halkaas oo aad la macaamilayso dadka aan horay u arkin astaantaada. Markaa, si aad u geliso caddaymaha bulshada ee suuq-geynta fiidyaha, waxaad isticmaali kartaa markhaatiyaal, faallooyin, calaamadaha xiddigaha, iyo nuxurka isticmaaluhu soo saaray.
Markhaatiyadu waxay kaa caawinayaan inaad erayada afka macmiilkaaga ka soo saarto ka dibna la wadaag faallooyinka adduunka. Dib u eegista ama jawaab celinta macaamiishu waxay qeexaysaa khibrada oo dhan iyo sida adeegyadaadu uga faa'iideen macaamiisha. Intaa waxaa dheer, markhaatiyadani waxay ka caawiyaan macaamiisha cusub inay aaminaan astaantaada.
Isticmaalka macluumaadka uu isticmaaluhu soo saaray waxay ku siinaysaa rajadaada macaamiisha ku raaxaysanaya alaabtaada ama adeegyadaada. Tani waxay si weyn ugu shaqeysaa dhexda ololayaasha funnel waxayna u beddeshaa macaamiisha suurtagalka ah ee xayndaabka.
Isticmaal sirta Warshadaha Xayeysiiska
Haddii aad dhammaysay fikradda hal-abuurka iyo bilawga xayaysiiska, waxa aad u wanaagsan tahay in aad soo jiidato dareenka isticmaalayaasha. Laakiin, ka waran iibka iyo heerka beddelka? Waa muhiim in la wado iibka oo la helo gujisyo badan iyada oo aan la isticmaalin dhowr saacadood.
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad qaabayso xayeysiisyada iibka ugu badan. Waxaa jira hal qaaciido oo ay daabacayaasha xayeysiiska ah ay ku tiirsanaayeen sanado badan si ay rajada ugu rogaan lacag bixinta macaamiisha si joogto ah. Qaaciddada waxaa loo yaqaan Aida, taas oo u taagan dareenka, xiisaha, rabitaan, iyo ficil. Waxaad isticmaali kartaa qaaciidadan si aad u abuurto qoraallada fiidyaha oo aad si toos ah u hesho dhagsiinno badan adiga oo aan saacado gelinayn madaxaaga oo ku garaacaya gidaarka.
Markaad samaynayso wax-soo-saarka fiidyowga, ha ahaato muuqaal caadi ah ama animation, waa inaad soo jiidataa dareenka rajada, ilaali xiisaha, dhisto rabitaanka badeecadaha ka dibna ku riix inay ficil sameeyaan. Talaabooyinkani waxay hubin doonaan in xayeysiisyadu ay ahaan doonaan kuwo khuseeya, soo jiidashada, iyo beddelka-diirada.
Waqtiga Xayeysiiska Fiidiyowgaaga
Dadka intooda badan waxay daawadaan xayaysiisyada haddii ay u arkaan kuwo xiiso leh laakiin aad goor hore ayay u boodaan haddii ay xayeysiisku dheeraato. Sidaa darteed, iska ilaali inaad guushaada u beddesho dukumentari. Ka dhig xayaysiisyada fiidyaha mid gaaban oo macaan sababtoo ah inta badan xayeysiisyada fiidyowga onlaynka ah waa 30 ilbiriqsi ama ka yar.
Inta aad fiidyaha soo saari doonto, maskaxdaada ku hay dhererkan ugu fiican marka aad samaynayso qoraalka fiidyaha. Si kastaba ha ahaatee, fiidiyowyada dhaadheer ayaa sidoo kale shaqeeya, marka aad la macaamilayso meelaynta sumadda. Tusaale ahaan, haddii aad sharraxayso waayo-aragnimo ama sheeko ku saabsan summadaada oo ay ku jirto macmiil ama wakiil shirkad, muuqaal dheer ayaa ku habboon.
Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in laga tago waxyaabaha aan khusayn oo aan loo baahnayn. Sidoo kale, isku day inaad sida ugu dhaqsaha badan u faafiso fariintaada si daawadayaasha ay u daawadaan ugana hawl galaan. Dhererka xayeysiiska fiidyahaaga waa inuu xaqiijiyaa in macaamiishu aanay u arkin caajisnimo iyo mid aan rafcaan lahayn.
Ku dar Wicitaan Ficil
Haddi ay tahay fiidyahaaga ama maqaal ku darista baaqa ficilka ayaa door wayn ka ciyaara in dadka loo sheego waxa la samaynayo. Isticmaalka wicitaanka ficilka (CTA) waxay dadka ka dhigtaa dhiirigelin nuxurka oo waxay ka caawisaa inay go'aansadaan inay OK tahay inay iibsadaan alaabta.
Wicitaanka ficilku wuxuu noqon karaa hadal ama dhawr kelmadood oo ka caawiya isticmaalayaasha inay sameeyaan xiga marka ay daawadaan xayeysiiska ama akhriyaan maqaalka oo dhammaystiran.
Waxaa intaa dheer, hadafka xayaysiis kasta oo muuqaal ah waa in lagu dhiirigaliyo dhagaystayaasha inay qaadaan xoogaa ficil ah. Wicitaanka ficilka (CTA) waa la duubi karaa ama lagu dari karaa qoraal iyo sawirro.
Fikrad ahaan, waxa fiican in la isticmaalo wicitaanka ficilka dhammaadka fiidyowga. Tusaale ahaan, si loo tuso macaamiishaada, waxay booqan karaan boggaaga ama mareegahaaga si aad u hesho tafaasiil dheeraad ah, iska diiwaan geli qiimo dhimis iyo heshiisyo, ama iibso alaabtaada iyo adeegyadaada.
Xayeysiis fiidiyowgu wuxuu noqday aaladda ugu xooggan ee macaamiishaada ku ilaalinaysa inay ku xidhmaan astaantaada. Iyadoo taas la leeyahay, samaynta hal-abuur, gaaban, iyo muuqaallo soo jiidasho leh waa lama huraan. Dadku ma arkaan wax kasta oo aad soo geliso baraha bulshada, waxa ay kala shaandheeyaan waxyaabaha ugu xiisaha badan, marka ay timaado xayeysiisyada, waxa ay door bidaan kuwa ugu xiisaha badan. Suuqgeynta fiidiyaha ee waxtarka leh ayaa kaa ilaalinaysa helitaanka macaamiisha, kordhinta iibka iyo aqoonsiga sumadda. Sidaa darteed, xayeysiisyada fiidiyowga waa in la sameeyaa ka dib marka la tixgeliyo talooyinka looga hadlay maqaalka.
Tags: afkuheerka beddelka xayeysiiskawarshadaha xayeysiintacaawiyaybrandsicir-bararkaisbeddelkakordhinta beddelka xayeysiiskadhererka muuqaalkadhexdadhaqaaq gantaalcaddayn bulshomarqaatiyaaluGCMacmiilka la soo saarayxayeysiis video ahxayeysiinta fiidiyowgawax soo saarka videowaqtiga video
Daniel Salikov waa Agaasimaha Suuqgeynta ee Dhaqdhaqaaqa gantaalaha, Hay'adda naqshadaynta dhaqdhaqaaqa diiradda saaraysa abuurista sharraxaadda iyo fiidiyowyada ganacsiga ee bilawga.
Sida Si guul leh loola xidhiidho dadka saameeya